Sidee shaqo looga helaa Kolombiya? - ALinks
Dad badan ayaan ka warqabin koboca dhaqaale ee Kolombiya ay sameysay tobanaankii sano ee la soo dhaafay.
Kolombiya, waxaa jira dhowr qaab oo shaqo lagu dalbado. Iskuulada qaar baaro macalimiinta ka socda wadamada kale, halka shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah ay ku xayeysiiyaan websaydhada shaqada sida runtii.com, halka kuwa kale ay si toos ah ugu xayeysiiyaan websaydhadooda.
Kolombiya, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, internetka, ama isku xirka, waa habka ugu wanaagsan ee lagu dalbado shaqooyin. Ganacsiyada yaryar waxay ku xayeysiiyaan magaalada oo dhan ama hadal ahaan magaalooyinka yaryar.
Asal ahaan waxaad leedahay shan xulasho:
Isdiiwaangeli shabakadaha sida elempleo, - computrabajo, iyo / ama trabajando oo jooga Kolombiya. Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo laga kala xusho, waxaadna ku kala shaandheyn kartaa waax, mushaar bille ah, nooca shaqada, goobta, iyo arrimo kale intaadan dalban.
Tag boggaga rasmiga ah ee shirkadaha aad xiiseyneyso oo raadi bogagga qorista, shaqaalaynta, iyo furitaanka shaqada, oo had iyo goorba halkaas jooga.
Weydii saaxiibbadaa reer Colombia iyo kuwa yaqaanna haddii ay ka warqabaan wixii shaqo furitaan ah ama shirkado laga yaabo inay u baahan yihiin astaamo xirfad-yaqaanno gaar ah. Waxa kale oo laga yaabaa inaad raadiso kooxaha reer Kolombiya ee Facebook oo aad ku biirto si aad u gaartid isla ujeeddadaas.
U adeegso Linkedin inaad ku kormeerto kaaliyayaasha / xafiisyada laanta Kolombiya ee shirkadaha caalamiga ah iyo sidoo kale shirkadaha qaranka. Maamulayaasha ilaha aadanaha waa in lagu daraa maxaa yeelay waxay badanaa soo diraan furitaan shaqo iyo wicitaanno shaqo.
Ugu dambeyntii laakiin uguyaraan, waa inaad isku daydaa "inaad garaacdo albaabbada," taasi waa, inaad aaddo meherado aad jeceshahay ama ku habboon astaantaada ama aad weydiiso haddii ay qof u baahan yihiin ama aad uga tagayso qoraalkaaga qof aad taqaanid
Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Shaqaaleeysato ??
Awood u lahaanshaha inaad ku wada xiriirto labada Isbaanish iyo Ingriis waxay kuu suurta gelin doontaa inaad ka shaqeyso meherado kala duwan oo dhan Colombia. Shirkadaha caalamiga ah waxay doorbidaan labada luuqadood ee Ingiriisiga iyo Isbaanishka, inta badan wareysiyada lagu qaado Ingiriisiga.
Waa ka soo horjeedka marka ay timaado shaqada barista Ingiriisiga. Haddii Ingiriisigu yahay luqaddaada koowaad, waxaad shaqo ku heli kartaa shahaadada TEFL ama CELTA (iyadoon loo eegin sida wanaagsan ee Isbaanishku u yahay). Iskuulada gaarka loo leeyahay iyo koleejyada, dhanka kale, waxay u baahan lahaayeen heer sare oo waxbarasho, sida shahaadada macallinimada ama PGCE.
Sidee loo Codsadaa Visa-shaqo ee Kolombiya ??
Waxaad ka dalban kartaa fiisaha shaqada Kolombiya khadka tooska ah. Fiisooyinka dalka Kolombiya sidoo kale waxaa laga heli karaa qunsuliyadaha Colombia ee adduunka. Kolombiya waxay qunsuliyado ku leedahay magaalooyinka Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, Orlando, Newark, New York, San Francisco, iyo Washington, DC ee dalka Mareykanka.
Nidaamka dalabka fiisaha ee Colombia waa mid fudud tan iyo markii lagu dhameystiray khadka tooska ah. Waxaad ka dalban kartaa fiiso Kolombiya khadka tooska ah. Baadhitaannada dhammaan dukumintiyada loo baahan yahay oo ah qaab PDF ah, iyo sidoo kale sawir qaab jpg ah, ayaa looga baahan yahay codsigan. Tilmaam dhammaystiran oo ku saabsan dalbashada khadka tooska ah ayaa sidoo kale laga heli karaa halkan.
Haddii aad tan ku sameyneyso Kolombiya, waxaad u baahan doontaa inaad u duusho Bogotá si aad fiiso ugu hesho baasaboorkaaga ka dib markaad hesho oggolaanshaha fiisada internetka. Haddii aad ku sugan tahay waddan kale, waxaad ka dalban kartaa fiiso qunsuliyada Kolombiya.
Helitaanka Fiisaha Shaqada iyadoo loo marayo Hay'ad Visa ah
Haddii aad horeyba ugu jirtay Kolombiya, waxaad dalban kartaa fiisaha shaqada ee Colombia adoo adeegsanaya adeegga fiisaha. Hay'ad fiiso ayaa maamuli doonta dalabkaaga internetka waxayna hubin doontaa inaad haysato dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka ah, oo lagu daray waxaad ka faa'iideysan doontaa khibradooda.
Si loo bixiyo adeegyada fiisaha Colombia, Medellin Guru wuxuu iskaashi la yeeshay waxaan aaminsanahay inay tahay hay'adda fiiso ee ugu wanaagsan Medellin. Adeegani wuxuu ka kooban yahay astaamaha soo socda:
Wadahadalka khadka tooska ah - hel jawaabo dhakhso leh su'aalaha fiisahaaga.
Hel xigasho fiiso deg deg ah adoo buuxinaya foomka khadka tooska ah.
Si aad fiisaha ugu hesho baasaboorkaaga, u dir baasaboorkaaga Bogota.
El Poblado waa xaafad ka mid ah Medellin halkaas oo aan ku leenahay xafiis.
Marka la barbardhigo kuwa kale ee fiisada bixiya, qiimaha waa macquul.
Fiisaha Dubai ee Hindida
Fiisaha Shiinaha ee Pakistan
Sidee looga helaa shaqo Griiga?
Dalbo Visa talyaaniga Talaabooyinkan Fudud !!
Sidee loo Helaa Shaqada ugu Fiican Maraykanka?